Inona no Hataontsika Raha Tia sy Matoky An’i Jehovah Isika?
Miezaka ho Matotra toa An’i Kristy ve Ianao?
Mandrisika Anao Hanao ny Tsara ve ny Feon’ny Fieritreretanao?
“Aoka Ianareo ho Mafy Orina ao Amin’ny Finoana”
Inona no Manaporofo fa Tia Antsika i Jehovah?
Inona no Hataontsika Raha Tia An’i Jehovah Isika?
TANTARAM-PIAINANA Sambatra Aho fa Notahin’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Lamba Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe Mongol Mooré Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Septambra 2015
“Isika kosa tia, satria izy no tia antsika voalohany.”—1 JAONA 4:19.
HIRA: 56, 138
NAHOANA IANAO NO VAO MAINKA HO TIA AN’I JEHOVAH REHEFA MIERITRERITRA . . .
ny zavatra omeny anao?
ny zavatra ampianariny anao?
ny toroheviny sy ny fananarany?
1, 2. Inona no nataon’i Jehovah mba hanampiana antsika ho tia azy?
INONA no tokony hataon’ny raim-pianakaviana raha tiany hanaraka an’izay lazainy ny zanany? Manaiky angamba isika fa tokony ho modely aloha izy. Hoy ny apostoly Jaona: ‘Isika kosa tia, satria Andriamanitra no tia antsika voalohany.’ (1 Jaona 4:19) I Jehovah àry no Ray be fitiavana indrindra. Modely tena tsara izy ka lasa tia azy koa isika.
2 Nahoana no hoe “tia antsika voalohany” i Jehovah? Hoy ny apostoly Paoly: ‘Andriamanitra naneho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty ho antsika i Kristy.’ (Rom. 5:8) Sorona lehibe no nataon’i Jehovah satria ny Zanany mihitsy no nomeny ho vidim-panavotana ho an’ny olona manam-pinoana. Nasehony tamin’izany ny atao hoe tena fitiavana. Malala-tanana ny olona tena tia, ary tsy tia tena. Lasa afaka manatona an’i Jehovah sy mandray soa amin’ny fitiavany isika noho ilay sorona nataony, sady afaka mamaly fitia azy.—1 Jaona 4:10.
3, 4. Inona no tian’i Jesosy holazaina ao amin’ny Marka 12:30?
3 Ny fitiavana no toetra mampiavaka an’i Jehovah. Rehefa nisy nanontany àry i Jesosy hoe inona no didy lehibe indrindra, dia hoy izy: “Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny sainao manontolo ary ny herinao manontolo.” (Mar. 12:30) Hitantsika amin’izany fa tokony ho avy ao am-po aloha ny fitiavana an’Andriamanitra. Halahelo izy raha tsy tia azy amin’ny fo manontolo isika. Nilaza koa i Jesosy hoe tokony ho tia an’i Jehovah amin’ny tena manontolo sy ny saina manontolo ary ny hery manontolo isika. Tsy ao am-po fotsiny àry ny fitiavana an’Andriamanitra. Raha tena tia azy isika, dia hampiasaintsika hanompoana azy koa ny fahaizantsika sy ny herintsika manontolo. Izany no takiny amintsika, araka ny tenin’i Mika mpaminany.—Vakio ny Mika 6:8.
4 Tokony ho tia tanteraka an’ilay Raintsika any an-danitra isika. Ny fahaizantsika sy ny fihetseham-pontsika ary ny herintsika manontolo no tafiditra amin’izany, araka ny tenin’i Jesosy. Inona àry no tokony hataontsika mba hanaporofoana fa tia an’i Jehovah isika, ary inona no azontsika atao mba ho tia azy kokoa isika? Handinika an’izany isika izao.
ANKASITRAHO IZAY OMENY ANAO
5. Inona no hataontsika raha mankasitraka an’izay rehetra omen’i Jehovah isika?
5 Inona no ataonao rehefa misy manome zavatra anao? Azo antoka fa hasehonao hoe mankasitraka an’ilay izy ianao. Tsy hataonao tsinontsinona koa ilay izy fa hampiasainao tsara. Hoy i Jakoba mpianatr’i Jesosy: “Avy any ambony ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra, satria midina avy any amin’ny Rain’ny fahazavana eny amin’ny lanitra izany. Tsy miovaova toy ny fihodinan’ny aloka izy.” (Jak. 1:17) Manome an’izay ilaintsika foana i Jehovah mba hahavelona antsika sy hahasambatra antsika. Tena mandrisika antsika ho tia azy izany.
6. Inona no tsy maintsy nataon’ny Israelita raha tian’izy ireo ny hotahin’i Jehovah foana?
6 Nokarakarain’i Jehovah sy notahiny foana ny Israelita, nandritra ny an-jatony taona. Nomeny an’izay nilainy izy ireo sady nampianariny. (Deot. 4:7, 8) Nila nankatò ny Lalàny anefa izy ireo raha te hotahiny foana. Tokony homeny an’i Jehovah foana, ohatra, “ny tsara indrindra amin’ny voaloham-bokatry” ny taniny. (Eks. 23:19) Raha nanao an’izany izy ireo, dia ho nanaporofo fa tsy nanao tsinontsinona ny fitiavan’i Jehovah sy ny fitahiany.—Vakio ny Deoteronomia 8:7-11.
7. Ahoana no azontsika ampiasana ny “zava-tsarobidy” ananantsika raha tia an’i Jehovah isika?
7 Ary ahoana ny amintsika? Tsy asaina manao fanatitra intsony isika. Rariny anefa raha manome voninahitra an’i Jehovah amin’ireo “zava-tsarobidy” ananantsika isika. (Ohab. 3:9) Asehontsika amin’izany fa tia azy isika. Azontsika atao, ohatra, ny manome vola na zavatra hafa mba hanohanana ny asan’ilay Fanjakana eo an-toerana sy eran-tany. Porofointsika amin’izany fa tia an’i Jehovah isika, na manankarena na mahantra. (2 Kor. 8:12) Mbola misy zavatra hafa azo atao anefa.
8, 9. Nahoana no azo lazaina fa tia an’i Jehovah isika matoa matoky ny fampanantenany? Manomeza ohatra.
8 Nampahatsiahy ny mpanara-dia azy i Jesosy fa tsy tokony hanahy izy ireo hoe inona no hohaniny na hotafiany. Tokony hikatsaka an’ilay Fanjakana alohan’ny zavatra hafa kosa izy ireo. Nilaza i Jesosy fa mampanantena i Jehovah hoe hanome izay tena ilain’izy ireo. (Mat. 6:31-33) Tena tia an’i Jehovah isika raha tena matoky an’io fampanantenana io. Tsy azo lazaina hoe tiantsika mantsy ny olona iray raha tsy tena atokisantsika. (Sal. 143:8) Mieritrereta àry hoe: ‘Hita amin’ny tanjoko sy ny fomba fiainako ve fa tena tia an’i Jehovah aho? Hita amin’ny zavatra ataoko isan’andro ve fa tena matoky aho hoe vitany ny manome izay ilaiko?’
9 Tia sy natoky an’i Jehovah ny rahalahy iray atao hoe Mike. Tena te hanompo tany an-tany hafa izy, tamin’izy mbola tanora. Nanambady izy tatỳ aoriana ary niteraka roa, nefa mbola tsy niova ilay tanjony. Vao mainka izy te handeha rehefa namaky lahatsoratra sy tatitra momba ny asa fitoriana any amin’ny toerana ilana mpitory maro kokoa. Tapa-kevitra àry izy mianakavy fa hanatsotra ny fiainany. Namidiny ny tranony, ary nifindra tamin’ny trano kelikely izy. Nahenany koa ny asany ary nianarany hoe ahoana no hanaovana an’ilay asa, na dia any an-tany hafa aza izy. Nifindra tany an-tany hafa izy mianakavy avy eo, ary tena tiany ilay izy. Hoy i Mike, roa taona tatỳ aoriana: “Hitanay fa marina tokoa ilay tenin’i Jesosy ao amin’ny Matio 6:33.”
ANKASITRAHO NY FAMPIANARANY
10. Inona no ho vokany raha misaintsaina momba an’i Jehovah isika, toy ny nataon’i Davida?
10 Nahavariana an’i Davida Mpanjaka ny zavatra hitany teny amin’ny lanitra, 3 000 taona teo ho eo izay. Hoy izy: “Ny lanitra manambara ny voninahitr’Andriamanitra, ary ny habakabaka milaza ny asan’ny tanany.” Nampiaiky azy koa ny Lalàn’Andriamanitra, ka hoy izy: “Tonga lafatra ny lalàn’i Jehovah sady mamelombelona. Azo itokisana ny fampahatsiahivan’i Jehovah, mampahahendry an’izay mbola tsy dia nandia fiainana.” Inona no vokany rehefa nisaintsaina sy nankasitraka an’izany rehetra izany i Davida? Lasa nifandray akaiky izy sy Jehovah. Hoy izy: “Enga anie ny tenin’ny vavako sy izay saintsainiko ato am-poko ka hankasitrahanao Jehovah ô, ry Vatolampiko sy Mpanavotra ahy!”—Sal. 19:1, 7, 14.
11. Inona no tokony hataontsika raha tena tia an’i Jehovah isika? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
11 Mahalala zavatra be dia be momba ny zavaboarin’i Jehovah sy ny fikasany isika ankehitriny. Ity tontolo ity indray mampirisika ny olona hanao fianarana ambony. Maro anefa no mahita fa matetika no lasa tsy mino an’Andriamanitra sy tsy tia azy ny olona nanao fianarana ambony. Ny Baiboly kosa mampirisika antsika hanana fahendrena sy fahiratan-tsaina, fa tsy fahalalana fotsiny. Midika izany hoe mila mahay mampiasa ny fahalalana nomen’Andriamanitra antsika isika mba hahasoa antsika sy hahasoa ny hafa. (Ohab. 4:5-7) “Sitrapon’Andriamanitra ny hamonjena ny karazan’olona rehetra sy ny hananany fahalalana marina tsara ny fahamarinana.” (1 Tim. 2:4) Asehontsika àry fa tia an’i Jehovah isika rehefa mazoto miresaka amin’ny olon-drehetra ny vaovao tsaran’ilay Fanjakany sy ny fikasany momba ny olombelona.—Vakio ny Salamo 66:16, 17.
12. Inona no nolazain’ny ankizivavy iray nahazo fanomezana avy tamin’i Jehovah?
12 Na ny ankizy aza afaka manaporofo hoe tia an’i Jehovah. Afaka mankasitraka an’izay omeny izy ireo. Nitantara i Shannon fa nanatrika an’ilay fivoriamben’ny vondrom-paritra hoe “Fitiavam-pivavahana” izy sy ny rahavaviny 10 taona ary ny ray aman-dreniny, tamin’izy 11 taona. Nasaina nipetraka teo amin’ny toerana iray ny ankizy tamin’izay. Natahotahotra i Shannon nefa nankeny ihany. Tsy nampoiziny avy eo fa nomena boky tsara tarehy hoe Manontany ny Tanora—Valiny Mandaitra ny ankizy rehetra. Inona no vokatr’izany taminy? Hoy izy: “Teo vao tsapako fa tena misy i Jehovah ary tiany be mihitsy aho.” Hoy ihany i Shannon: “Faly be izahay fa nomen’i Jehovah Andriamanitray fanomezana tsara tarehy sy tonga lafatra.”
EKEO NY TOROHEVINY SY NY FANANARANY
13, 14. Raha tia an’i Jehovah isika, ahoana no tokony ho fihetsitsika rehefa toroany hevitra?
13 Hoy ny Baiboly: “Izay tian’i Jehovah no anariny, tahaka ny ataon’ny ray amin’ny zanaka tiany.” (Ohab. 3:12) Inona anefa no tokony hataontsika rehefa anarina? Marina fa nilaza ny apostoly Paoly hoe: “Tsy misy famaizana toa mahafaly eo no ho eo, fa mampahory.” Tena zava-dehibe anefa ny famaizana matoa izy nanohy hoe: “Avy eo anefa izy io, dia mitondra vokatra hiadanana ho an’izay nampiofanina tamin’ny alalan’izany. Ary ny fahamarinana izany vokatra izany.” (Heb. 12:11) Raha tia an’i Jehovah àry isika, dia tokony hitandrina mba tsy hanao tsinontsinona ny toroheviny na ho tezitra rehefa toroana hevitra. Mety ho sarotra amintsika izany nefa ho vitantsika raha tia an’i Jehovah isika.
14 Tsy niraharaha ny torohevitr’i Jehovah ny Jiosy maro tamin’ny andron’i Malakia. Fantatr’izy ireo ny lalàna momba ny fanatitra, nefa tsy noraharahainy mihitsy ka tsy maintsy nananatra mafy azy ireo i Jehovah. (Vakio ny Malakia 1:12, 13.) Tena ratsy ny nataon’izy ireo matoa i Jehovah niteny hoe: “Hozoniko ianareo, ary hovako ho ozona ny tsodrano omenareo. Eny, efa novako ho ozona mihitsy aza izany, satria tsy nandatsaka am-po ilay didy ianareo.” (Mal. 2:1, 2) Ratsy tokoa ny vokany raha zatra tsy miraharaha na minia tsy mihaino ny torohevitr’i Jehovah isika.
Aza manaiky hovolavolain’ity tontolo ity fa araho ny torohevitr’Andriamanitra (Fehintsoratra 15)
15. Inona no toetran’ny olona maro ankehitriny nefa tsy tokony hananantsika?
15 Tia tena sy manambony tena ny olona eto amin’ity tontolo ity, ka tsy tia ahitsy na toroana hevitra. Misy koa manaiky tsy sazoka fotsiny rehefa toroana hevitra na anarina. Ny Kristianina kosa ampirisihina mba ‘tsy hanaiky hovolavolain’ity tontolo ity intsony’, fa hamantatra ny sitrapon’Andriamanitra sy hanao an’izany. (Rom. 12:2) Mampiasa ny fandaminany i Jehovah mba hanomezana torohevitra antsika amin’ny fotoana mety, ohatra hoe momba ny namana sy ny fialam-boly ary ny fifandraisana amin’ny lehilahy raha vehivavy isika na amin’ny vehivavy raha lehilahy isika. Hita hoe mankasitraka an’i Jehovah sy tia azy amin’ny fo manontolo isika, raha vonona hanaiky sy hampihatra an’ireny torohevitra ireny.—Jaona 14:31; Rom. 6:17.
MATOKIA AN’I JEHOVAH DIA HAMONJY ANAO IZY
16, 17. a) Nahoana isika no mila mamantatra ny sitrapon’i Jehovah aloha vao manapa-kevitra? b) Inona no porofo fa tsy tia an’i Jehovah sy tsy natoky azy ny Israelita?
16 Tonga dia mihazakazaka any amin’ny ray aman-dreniny ny ankizy raha vao mitady hisy loza. Mihamatoky tena anefa izy rehefa ela ny ela ka mandray fanapahan-kevitra samirery. Izany no porofo fa efa lasa olon-dehibe izy. Raha mifankatia be kosa izy sy ny ray aman-dreniny, dia mbola maka hevitra any amin’izy ireo ihany izy rehefa hanapa-kevitra. Toy izany koa no tokony hataontsika. Marina fa efa omen’i Jehovah ny fanahiny masina isika, ka efa maniry hanao ny tsara sady mahavita an’izany. Tsy tia azy sy tsy matoky azy anefa isika raha tsy mamantatra ny heviny aloha vao manapa-kevitra.—Fil. 2:13.
17 Resin’ny Filistinina ny Israelita, indray mandeha, tamin’ny andron’i Samoela. Tapi-dalan-kaleha izy ireo tamin’izay. Inona àry no nataony? Hoy izy ireo: “Andao halaintsika avy any Silo ny Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah, mba ho eto amintsika ka hamonjy antsika eo am-pelatanan’ny fahavalontsika.” Inona no vokany? “Be dia be no maty, ka ny Israely dia nahafatesana lehilahy telo alina nandeha an-tongotra. Lasa babo koa ny Vata masin’Andriamanitra.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Naka an’ilay Vata ny Israelita, satria mety ho nihevitra hoe amin’izay i Jehovah hanampy azy. Nanao izay saim-pantany fotsiny anefa izy ireo fa tsy nanontany an’i Jehovah, ka loza ny vokany.—Vakio ny Ohabolana 14:12.
18. Inona no tokony hataontsika raha tena matoky an’i Jehovah isika?
18 Tena tia an’i Jehovah sy natoky azy kosa ny mpanao salamo iray. Hoy izy: “Hiandry an’Andriamanitra aho, satria mbola hidera azy, fa izy no famonjena lehibe ho ahy. Mamoy fo aho, ry Andriamanitro ô, ka mahatsiaro anao.” (Sal. 42:5, 6) Tena tia sy matoky an’ilay Raintsika any an-danitra koa ve ianao? Mety hamaly ianao hoe: “Eny.” Mbola afaka miezaka ny hatoky azy kokoa anefa ianao. Hoy mantsy ny Baiboly: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao. Eritrereto izy amin’izay rehetra ataonao, dia hataony mandeha tsara ny fiainanao.”—Ohab. 3:5, 6.
19. Inona no hataonao mba hanaporofoana fa tia an’i Jehovah ianao?
19 I Jehovah no tia antsika voalohany ka nasehony tamin’izany hoe inona no tokony hataontsika raha tia azy isika. Tadidio foana fa izy no modely tsara indrindra ho antsika. Aoka àry isika hiezaka kokoa ho tia azy ‘amin’ny fontsika manontolo sy ny tenantsika manontolo sy ny saintsika manontolo ary ny herintsika manontolo.’—Mar. 12:30.
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2015
“Tiavo i Jehovah Andriamanitrao”